दिनेश्वर गुप्ता । लहान ३ मंसिर । विषादी न्यूनिकरण र दोब्बर तेब्बर उब्जाउको लागि माटो परिक्षण अभियान सिरहामा तिब्र रुप लिंदै गएको छ । यस अभियान अन्तर्गत
तान्त्रिक विद्यामा सफलता पाउंन कमलामा भुत मेला
लहान, २९ कात्तिक । अंधविश्वासलाई बढोत्तरी दिंदै तान्त्रिक विद्यामा सफलता पाउंन सिरहा र धनुषा सीमामा पर्ने कमला नदी छेउमा आज भूत मेला लागेको छ । कमला
मधेश विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा एमाले विरोधमा प्रदर्शन
लहान, २९ कात्तिक । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललगायत मधेशमा एमालेको ओहोरदोहोर बढ्दै गएपछि आज लहानमा मधेसी मोर्चाका कर्याकर्ताले सडक अबरोध गर्दै टायर
तीन बुंदे सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन नभए सडक तताउंने
लहान, २७ कात्तिक । आज मलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो एक आध दिन यताउता नभए संविधान संशोधनको प्रस्ताव संदनमा लैजाने आश्वासन दिनुभएको तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ
मधेशीको भोटले म प्रधानमन्त्री बन्न पाए ः प्रम प्रचण्ड
लहान, २६ कात्तिक । मधेशीले भोट नदिएको भए आज म प्रधानमन्त्री भएर यसरी बोल्न पाउंने थिएन । मधेशकै भोटबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाएकोले यहांको जनताले उठाएको माग
लहान,२४ कात्तिक । यौनकर्मी महिलाले म यौनकर्मी महिला हुँ, हामी किन र कसरी यौनकर्मी बन्यौं, समस्या केके छन्, राज्यले हाम्रो लागि यस्तो कानुन बनाओस भनेर खुलेर
Date : 30 Oct 2016
ब्लुबुक लिएपछि ट्राफिक प्रहरीलाई मासु—रक्सी
लहान, १३ कात्तिक । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा ट्राफिक प्रहरीले अनाहकमा सवारी चालकलाई दुःख दिने गरेको खुलासा भएको छ । धनगढी प्रहरीसंग आबद्ध रहेका प्रसनी सचेन्द्र यादवले
भूमिहीनहरुलाई गगनचुम्मी महलको विरुद्धमा अभियान थाल्न जोड
लहान, १३ कात्तिक । जमिन्दारले खेती गरेका छैन जग्गा बांझो नै रहेको एसियाली किसान संघ तथा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मंचका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले दावी गर्नुभयो ।
दिनेश्वर गुप्ता । लहान, ८ कात्तिक । बहुविवाह अपराधिकरण हो भने यसलाई बढावा दिने काम शिक्षा क्षेत्रबाट नै हुने गरेको डा.महादेव साहले बताउंनुभयो । ओरेक नेपाल सिरहा
लहान, २२ असोज । सिरहा सदरमुकाममा आज स्थानीय र प्रहरीबीच भएको मुठभेडमा एक महिलासहित ३ प्रहरी घाइते भएका छन् भने स्थानीय युवाहरुले प्रहरीको एक मोटरसाइकलमा आगो
सिरहा, २२ असोज । पूर्वी मधेशमा झिझिया नाच विशेष रुपमा मनाउंने गरेको छ । यस पौराणिक नाचमा समाजलाई नपच्ने किसिमको गालीगलौजले विकृति बढाउंन थालेको छ ।
लहान, २२ असोज । म खेलकुदबाट राजनीतिकमा आएको हुं, खेलाडीप्रति मलाई औंधी माया छ सांसद रामचन्द्र यादवले बताउंनुभयो । खेल जगतलाई आगाडि बढाउंने प्रतिबद्धता गर्दै सिरहा क्षेत्र
प्रमोद यादव । विश्वले आईटीमा यति धेरै फड्को मारि सक्दा पनि नेपालमा भने आईटी शिक्षा बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छ । केहि समय अगाडि नेपालका गृह तथा
Date : 05 Oct 2016
दिनेश्वर गुप्ता लहान, १८ असोज । लहान लिटिल आईकन — १६ का विनर हेलिना सिंह भएकी छीन् । लहान सिटी जेसीजको आयोजनामा भद्रो १५ गतेदेखि यस क्षेत्रका
Date : 02 Oct 2016
लहान, १६ असोज । सिरहाको लहान स्थित रहेको मधेश मिडिया मिशन नेपालद्धारा संचालित सामुदायिक रेडियो सौगातले एफएमले छैठौं बार्षिकोत्सव धुमधामका साथ मनाइएका छन् । प्रेस काउन्सीलका सदस्य
लहान १३ असोज । ‘गुहार गुहार हौं’ हमर पुतौहके बच्चा होअवाला छैय, कनि एम्बुलेन्सवालाके बोलाअ द ’ यो सम्वाद एउटा सडक नाटकका पात्रको हो जसको नाम
लहान ६ असोज । मधेशी र थारु महिलाहरुले आफ्ना सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्न श्रद्धापूर्वक जितिया पर्वको तयारीमा जुटेका छन् । आजदेखि विधिवतरूपमा पर्व सुरु भई शुक्रबारको
लहान, ४ असोज । जारी संविधानमा मधेश र मधेशीको मागलाई समावेश नगरिएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सिरहा र लहानलगायत देशभरी कालो दिवसको रुपमा मनाएका छन्
लहान, २६ भाद्र । मिथिला स्टूडेन्ट युनियन नेपालले आज प्रथम बार्षिकोत्सव मनाइएको छ । बार्षिकोत्सवका प्रमुख आतिथ्य देवेन्द्र मिश्रले गर्दै मिथिला क्षेत्रको आफनो सम्पूर्ण जिम्मेवारी मिथिलाको
लहान, २१ भाद्र । विचौलियाको चकरमा परेर परिवारबाट बिछोडिएका सिरहाका चार बालकलाई भारतबाट उद्धार गरिएको छ । विचौलियाका चकरमा रहेका बालबालिकालाई बिहारमा पर्ने मुझफ्फरपुरबाट उद्धार गरी
लहान,१३ भाद्र । समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा लगाउंने मातृका यादव आज नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचण्डसंग पूनः सहवासमा पुगेको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ताले
लहान, ११ भाद्र । बकरी बजार ठेक्कामा निर्धारित भन्दा बढी रकम असुली गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्तका लहान प्रतिनिधि योगेन्द्र पासमान बताउंछन् । उनका अनुसार बकरी
लहान, १० भाद्र । सप्तऋषि नर्सिगं कार्यक्रम लहानमा अध्ययनरत खुश्बु गिरीले आफ्नो जन्म दिन विहीवार अनाथ बालबालिकासंग मनाइएका छन् । लहानको सगरमाथा अनाथालय लहानका बालबालिका मेरी
लहान, १० भाद्र । मैथिली सिने क्षेत्रका चर्चित कलाकार संगीत सिंहको असमायिक निधन भएको विहीवार आठौं दिनमा कलाकारहरुले श्रद्धाञ्जलीसभा गरेका छन् । मन्जिता सिने क्रियसन प्रा.लि. विराटनगरको
लहान ४ भाद्र । मधेशका चर्चित कलाकार संगित सिंहको विहीवार राति लडेर असामयिक निधन भएको छ । सिरहाका तेनुवापट्टी ९ सोहपुर स्थायी घर भएका ३४ वर्षिय सिंहको
लहान २७ साउन । सधैं लोडसेडिंग घटाउंने सूचना आउंछन् । तर, सेवाग्राही कहिले लोडसेडिंगबाट मुक्त पाउंदैन् । यसमा पनि यो प्रचण्ड गर्मीको समयमा राती नै विद्युत
लहान २५ साउन । सरकारले केही समयको लागि खोलाबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएपनि राती चोरेर विक्री गर्ने कार्य यथावत नै रहेको छ । गिट्टी
Date : 08 Aug 2016
लहान, २४ साउन । स्थानीयतह पूर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको (गाउंपालिकाको कार्यशर्त तथा कार्यविधि सम्बन्धि) व्यवस्था भए बमोजिम जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठि मधेशी मोर्चासहित गठबन्धनको विरोधको
लहान १७ साउन । सांसद कोष र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सिरहाको सन्तनगरदेखि भवानीपुरसम्म सडक ग्राभेल र सोलार बत्तिको समान खरिद भएपनि निकासा नपाएको क्षेत्र नंम्वर
लहान ३ साउन । मधेशको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा यदि गयो भने म सद्भावना पार्टी छोड्ने प्रतिबद्धता नवलकिशोर साहले गर्नुभयो । आज सिरहाको लहानमा केन्द्रीयस्तरको जिल्ला बैठकका
लहान, ३ साउन । बल्ल बल्ल प्रचण्ड जस्तो प्रगतिवादी नेता अब सुध्रिन थालेको जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले बताउंनुभयो । साउन १ गते नवसंग्राम दैनिकको कार्यालयमा आईपुग्नु
लहान, ४ जेठ । संघीयता विना देश चल्दैन, अब संघीयताको सवालमा पछाडि नहटने भन्दै मिडियाले यसमा समाधानको सम्वाद गर्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीयका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले
लहान, ४ असार । संचार कानुन सम्बन्धि दुई दिने तालिम रौतहटमा सम्पन्न भएको छ । मधेस मिडिया मिसन नेपालको आयोजनामा शुक्रबारदेखि शुरु भएको दुई दिने तालिम
Date : 15 Jun 2016
लहान नपाले पोखरी संरक्षणका साथै पानी सिञ्चित गर्न सक्रिय
लहान, ३२ जेठ । लहान नगरपालिका भित्र रहेको साना, मझौला र ठूला पोखरी तथा डबरालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ठेक्कामा दिइएको छ । नगरपालिका भित्र रहेको ५५
दिनेश्वर गुप्ता . लहान २५ जेठ । जतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको गाउँ जिवामा बैशाख ३१ गते राती डकैती भयो । पूर्वका प्रहरीहरुको निन्द हराम भयो ।
लहान २१ जेठ । ‘नखाएको विष लागेपछि’ छट्पटि त निकै नै हुने भयो । यो पीडाको कहर विष्णुनारायण कुशवाहा एग्रोभेटका प्रो.सत्यनारायण महतोको हो । उनले भने
लाहान, ११ जेठ । प्रचण्डको एमाओवादी पार्टी ठूलो भैसकियो त्यो भ्रम हो । भारत, अमेरिकालगायतको सबै भाइरस पसिसकियो अब प्रचण्ड प्रतिगामी हुन् बैद्य माओवादीका नेता सिपी
दिनेश्वर गुप्ता । लहान , ७ जेठ ÷ लहान नगरपालिकाभित्र पर्ने धार्मिक महत्वका तत्कालिन ढोढना–३ स्थित राजदेवी पञ्चावती मन्दिरमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन (८ गते जेठ÷शनिवार) ठूलो
दिनेश्वर गुप्ता । लहान, २९ बैशाख । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न सरकारले वार्ताको जाल फालेको हो भन्दै आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने
Pages 11 : You are at page3of 11